कांग्रेस पार्टीलाई जरैबाट उखेलेर फ्याक्नु आवश्यक छ : बाबुराम भट्टराई::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
तपाईंँले आर्थिक समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता देख्नुभयो । यो एकताले त्यो परिपूर्ति गर्छ या आवश्यकता सकिएको हो ?
तपाईँहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा सहमति भएको हो ?
यो एकताबाट एकाथरी झस्केका देखिन्छन् । विशेषगरी कांग्रेस त्यो स्थितिमा छ । यसरी वामहरू एक भए भने प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध जान सक्छन् भन्ने चिन्ता छ नि ?
यसलाई म अत्यन्तै पिछडिएको चिन्तन भन्छु । यो त हिजोको शीतयुद्धकालीन धङधङी हो । त्यसलाई फाल्न आवश्यक छ । हामी वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरू उन्नत लोकतन्त्र चाहन्छौँ । चुनावमा भोट हाल्ने अधिकारमात्र होइन, हरेक निर्णयमा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस किन झस्कने ? कांग्रेस यस्तो रुढीवादमा फसेको छ कि न उसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता अवलम्बन गर्छ न राज्यमा । नेपाली कांग्रेस संकित होइन, सच्चिन जरुरी छ । यो प्रतिस्पर्धी राजनीति हो, एकअर्काबाट सिकेर रूपान्तरण हुन जरुरी छ । यो कसैका विरुद्ध हैन । यो ध्रुवीकरणले लोकतन्त्रलाई अझै मजवुत बताउँछ । छिमेकीहरूको सम्बन्ध पनि अझ उचाइमा लैजान्छ । त्यसो हुनाले कोही त्रसित हुन आवश्यक छैन ।
पछिल्ला दुई वर्ष देश जटिल मोडबाट गुज्रियो । नाकाबन्दीलगायतका विषयले माओवादी र एमालेलाई एक ठाउँ हुन दिनुहुन्न भन्ने जस्तो पनि भयो । यस्तै जटिलताले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँ ल्याएको हो ?
कम्युनिस्टहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झस्कने गर्छ । यस कारण तपाईँहरू पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट नराख्ने विषयमा पनि छलफल गर्दै हो ?
यो अरुका कारणले गर्दा होइन । कुनै खास परिवेशमा हिजोका लोकतान्त्रिक, उदारवादी भन्ने पार्टीहरूले आफूलाई समयअनुकूल परिमार्जित गर्दै लगेका छन् । युरोपमा नै भन्नुस् न, फ्रान्समा म्याक्रोनको पार्टी नयाँ ढंगबाट उदय भयो । हिजोका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पुरानो ढंगबाट जान नसकेर रूपान्तरित हुँदै अगाडि बढेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि हाम्रो तत्कालको कार्यक्रम भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादको दिशमा जाने हो । साम्यवाद, स्वर्ग, रामराज्यको कल्पना मानिसले सुरुदेखि गर्दै आएको छ । तत्कालको कार्यक्रम भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्दै समाजवादमा जाने कार्यभार हो । पार्टी एकताको दिशामा जाँदा नामको विषयमा छलफल हुने हो । महाधिवेशनमा जाँदा यो विषयमा छलफल गरेर जाने भन्ने हाम्रो सहमति छ ।
‘हामीलाई मधेसविरोधी भन्नेहरु साइकल चढेर पछिपछि आए
भनसुनका आधारमा नक्कलीलाई सक्कली डाक्टर बनाईयो
मङ्लबार, साउन ११, २०७३
हामीले एउटा जननेता गुमाएका छौ : लोक गुरुङ
शुक्रबार, माघ २९, २०७२